बिचरा ! भाइरल जोडी पुजाको ५ बर्षको छोरा हेर्नुस, ६ महिनाको उमेर बाट आमा बुबा दुवैले छोडेर गए .(भिडियो) – Tufan Media News
बिचरा ! भाइरल जोडी पुजाको ५ बर्षको छोरा हेर्नुस, ६ महिनाको उमेर बाट आमा बुबा दुवैले छोडेर गए .(भिडियो)
१६ मंसिर २०७६, सोमबार २३:०३
झापा, दमक । इलामको चुलाचुलीमा भेटिएका हजुरवुवा र नातिनीको जस्तो उमेर अन्तर भएका श्रीमान् श्रीमती पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल जोडीका रुपमा परिचित छन् ।चुलाचुली गाउँपालिका ३ का ६७ बर्षीय सिंहप्रसाद लिम्बू र २१ बर्षीया पूजा लिम्बूले विवाह गरेपछि यतिबेला भाइरल बनेका हुन् । शारीरिक रुपमा अंपाङ्ग रहेकी पूजा र बृद्ध अवस्थामा पुगेका सिंहप्रसाद लिम्बूको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ।
उनको टाउको लुकाउने एउटा गतिलो घरसमेत छैन । साना साना नाति नातिना र वृद्ध मात्रै बस्ने घरमा बिजोक नै थियो भन्छन वृद्ध ।उता युवतीको पनि पहिले नै एकजना युवकसँग बिहे भएको र उसले छाडेर गएपछी बेसाहारा भएकी युवती जसको एउटा हात नै छैन ।
हात नभएपछि कसैले बिहे नगर्ने र बिहे भएपछी पनि आफुसङ नबस्ने भएपछी उनले वृद्धसंग बिबाह गरेको बताइन ।घरको अवस्था धेरै नै बिजोक रहेको छ । अहिले ६७ बर्षिय बाजेको जेठो छोरा बिरामी भएर बिर अस्पतालमा राखिएको छ । उनीहरुले आफ्नो छोरालाई उपचार गर्न सबैलाई आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सहयोगका लागि ९८११३५६३७४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । भाइरल बाजेले आफ्नो छोराको उपचार गर्नका लागि सबैअलि आर्थिक सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । साथै पुजाको पुर्ब श्रीमान बाट जन्मिएको ५ बर्षको छोराले सबैको मन रुवाउने कुरा गर्नुभएको छ ।